Review Top 5 kem dưỡng ẩm cho bà bầu nào tốt an toàn nhất | Muasalebang - Muasalebang
Review Top 5 kem dưỡng ẩm cho bà bầu nào tốt an toàn nhất | Muasalebang
Đang Đọc: Review Top 5 kem dưỡng ẩm cho bà bầu nào tốt an toàn nhất | Muasalebang in Muasalebang
Ngesikhathi sokukhulelwa, omama bahlale bekhathazekile ngokusebenzisa izimonyo kanye nemikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba. Ngoba ngokwemithombo eminingi, izithako zezimonyo zingathinta futhi zilimaze umbungu. Kodwa-ke, bewazi yini ukuthi ngesikhathi sokukhulelwa, isikhumba sakho sizobhekana nezinkinga eziningi njengesikhumba esomile, isikhumba esibucayi noma ukuntula ukunwebeka….Kuyaqondakala ukuthi, cream moisturizing kwabesifazane abakhulelwe yazalwa yaba yisixazululo komama abakhulelwe.
1 Imibandela yokukhetha i-moisturizer yabesifazane abakhulelwe
1.1 Uhlobo Lwesikhumba
1.2 Izithako ezifanele abesifazane abakhulelwe
1.3 Khetha ijeli, ukhilimu noma i-lotion texture?
1.4 Uphawu oludumile
2 Ama-moisturizers aphezulu ayi-5 aphephile kwabesifazane abakhulelwe
2.1 1. I-Top Innisfree Green Tea Balancing Cream Ex moisturizer yabesifazane abakhulelwe
2.2 2. I-Neutrogena Hydro Water Gel moisturizer yabesifazane abakhulelwe
2.3 3. I-Laneige Water Bank Gel Cream iphephile kwabesifazane abakhulelwe
2.4 4. I-Kiehl’s Super Multi Corrective Cream Anti-Aging Moisturizer
2.5 5. Safe Juice Beauty Nutrient Moisturizer
3 Amanye amanothi lapho usebenzisa ukhilimu wesikhumba wezinhlanzi ezikhulelwe
Imibandela yokukhetha i-moisturizer yabesifazane abakhulelwe
Ukukhetha cream moisturizing kwabesifazane abakhulelwe Akulula, kufanele ukhethe ukuthi ungaba kanjani ngempumelelo futhi uphephe. Ngakho-ke ake sikusize ngomuzwa wokuthenga olandelayo.
Wonke umuntu uzoba nezinhlobo ezahlukene zesikhumba, ikakhulukazi kwabesifazane abakhulelwe, ukukhetha i-moisturizer efanele yohlobo lwesikhumba sakho kuyoba kubaluleke kakhulu. Kwabesifazane abakhulelwe abanesikhumba esibucayi, okubaluleke kakhulu kufanele kunikezwe ekukhetheni i-moisturizer enezithako zemvelo ezinhle. Ngokuqondene nabantu abanesikhumba esomile, kufanele ukhethe okokuthambisa okunezithako eziningi ezisebenzayo ezithambisayo nezithambisayo….
Izithako ezifanele abesifazane abakhulelwe
Lapho ukhetha cream moisturizing kwabesifazane abakhulelweOmunye umbandela obalulekile ukuthi kufanele ukhethe imikhiqizo enezithako ezikhishwe emvelweni: itiye eliluhlaza, ama-alimondi, ukwatapheya, njll. Lezi zithako zinomphumela wokuthambisa isikhumba kanye nokuqinisekisa ukuphepha kwesikhumba. Ngaphandle kwalokho, akufanele futhi usebenzise ama-moisturizers aqukethe i-Hydroquinone, i-Octisalate, i-Benzoyl ukugwema ukulimala kumntwana.
Khetha ijeli, ukhilimu noma i-lotion texture?
Ngefomu lekhilimu lizofaneleka kwabesifazane abakhulelwe abanesikhumba esinamafutha, kuyilapho ifomu le-lotion lesikhumba esinamafutha amancane kanye nefomu lejeli lesikhumba samafutha ngaphezulu. Ngaphezu kwalokho, isakhiwo sesikhumba somuntu ngamunye asifani, ngakho-ke udinga ukunquma ukuthi uhlobo lwesikhumba sakho luyisikhumba esinamafutha, isikhumba esomile, isikhumba se-acne, isikhumba esibucayi.
Okokugcina, lapho uthenga okokuthambisa kwabesifazane abakhulelwe, kufanele ukhethe imikhiqizo yemikhiqizo edumile yezimonyo zokukhulelwa njenge-Innisfree, i-Bella B, i-Prevention Cream, njll. Le mikhiqizo yonke idalwe ngochwepheshe. inesipiliyoni seminyaka eminingi embonini yobuhle. Ngakho-ke, imigqa yokuthambisa ihlale yaziswa futhi iqinisekisa namazinga okuhlola.
Ama-moisturizers aphezulu ayi-5 aphephile kwabesifazane abakhulelwe
Ukwenza kube lula kuwe ukuthi ukhethe futhi uthenge cream moisturizing kwabesifazane abakhulelwe Okuhle kunakho konke, nazi iziphakamiso eziphezulu ezi-5 abafundi okungafanele bazishaye indiva.
1. I-Top Innisfree Green Tea Balancing Cream Ex moisturizer yabesifazane abakhulelwe
I-Innisfree Green Tea Balancing Cream Ex iwukhilimu othambisayo ongasetshenziswa abesifazane abakhulelwe onomklamo oqinile webhokisi lephepha. Ithoni yombala eyinhloko iyitiye eluhlaza ehlanganiswe nesizinda esimhlophe, okwenza umkhiqizo uthuthuke kakhulu. Ngaphezu kwalokho, i-Innsifree iphinde inake kakhulu ulwazi lomkhiqizo kanye nokupakishwa kwayo njengezithako, imvelaphi …. I-moisturizer ye-Innisfree inokuthungwa okukhulu, kodwa isabonakala kancane, ngakho uma ifakwe esikhumbeni, imunca ngokushesha kakhulu.
I-Innisfree Green Tea Moisturizing Cream Lokhu kudalwe kusuka emaqabunga etiye aluhlaza kumapentshisi eJeju. Iqukethe izithako ezisebenzayo zetiye eliluhlaza ezinemiphumela ejulile yokuthambisa ngenxa yokuqukethwe kwayo okuphezulu kwe-amino acid, ehle kakhulu ekufakeni amanzi kanye nokuswakama okufanelekile ezinhlotsheni eziningi zesikhumba. I-EGCG green tea essence isiza futhi ukubuyisela isikhumba ukubuyisela ubusha baso bemvelo. Ngesikhathi esifanayo nciphisa inqubo yokuguga yesikhumba kanye nokwandisa ukumelana, ngokumelene nemiphumela eyingozi esikhumbeni emvelweni.
Le moisturizer ye-Innisfree yabesifazane abakhulelwe izwakala sengathi igcotshwa esikhumbeni esomile, kulula ukuletha ukuthamba esikhumbeni. Umkhiqizo ulinganiselwe njengofanele isikhumba samafutha nenhlanganisela.
Intengo yesithenjwa: 299,000 VND
2. I-Neutrogena Hydro Water Gel moisturizer yabesifazane abakhulelwe
Imikhiqizo ye-Neutrogena moisturizer iheha amakhasimende ngenxa yedizayini yayo elula kakhulu kodwa entekenteke ngokwedlulele. Ibhokisi lika-ayisikhilimu kanye nokupakishwa kwawo kuluhlaza okwesibhakabhaka, kuletha umuzwa wokusha kanye nokupholile. Ibhodlela lokugcoba lenziwe ngepulasitiki yekhwalithi ephezulu enekepisi elimhlophe, lapho lizwakala liqinile ngokwedlulele futhi lipholile ngokwemvelo. Ikakhulukazi, i-Neutrogena Hydro Water Gel iwumugqa wamamoisturizer kwabesifazane abakhulelwe abanezinhlobo zesikhumba ezihlanganisiwe.
Njengama-moisturizers amaningi, I-Neutrogena Hydro Boost Water Gel moisturizer Iqukethe izithako ezivelele ezifana nalezi: Acts Hydrating Hyaluronic Acid, esetshenziselwa ukunikeza inani elidingekayo lamanzi, ukugwema ukuphelelwa amandla kwamanzi esikhumbeni ukuletha isikhumba esigcwele, esibushelelezi. I-Dimethicone Crosspolymer isebenza njengokuphuma kwe-silicone, esebenza njengesibandisi sesikhumba nezinwele, i-ejenti eyenza ifilimu, nesithuthukisi ukuthungwa kwezimonyo.
Ngaphandle kwalokho, i-Neutrogena Hydro Boost Water Gel inejeli ethambile, umbala opholile oluhlaza okwesibhakabhaka. Ngemva kokufaka ebusweni, ijeli ingena ngokushesha esikhumbeni, yenza isikhumba sithambile ngaphandle kokubangela ukucasuka kwesikhumba.
Intengo yesithenjwa: 350,000 VND
3. I-Laneige Water Bank Gel Cream iphephile kwabesifazane abakhulelwe
I-Laneige Water Bank Gel Cream iklanywe ngendlela yesitsha sepulasitiki esiluhlaza okwesibhakabhaka, ephrintiwe ngegama lomkhiqizo, izithako … imininingwane emzimbeni womkhiqizo omhlophe, ukubonwa kalula. I-Laneige pregnancy moisturizer Ibuye iqaphele kakhulu uma kuziwa ekwakhiweni ngesipuni esincane ukuze ikusize uthathe umkhiqizo kalula futhi ugcine umkhiqizo kalula futhi kalula. I-Laneige Water Bank Gel Cream ifanele isikhumba esivamile nesihlangene sabesifazane abakhulelwe. Ngemuva kokusebenzisa uzothola isisekelo se-Laneige Water Bank Gel Cream ayicwebezeli njengeminye imikhiqizo ethambisayo, ihlala isesimweni se-matte.
Umkhiqizo unobuchwepheshe be-Moisturizing Biogene obunamandla okuvuselela isikhumba ukuze senze umswakama wemvelo. Ehlanganiswe ne-Hydro-ion Mineral Water ingangena ijule engxenyeni yama-20 ye-epidermis yesikhumba, ngaleyo ndlela isize ukwenza amangqamuzana amswakama asebenze, athobe isikhumba kanye nokubuyisela isikhumba esonakele. Ngaphezu kwalokho, le moisturizer ye-Laneige iqukethe ne-conifer kanye ne-quinoa extracts. Inikeza imiphumela epholile esikhumbeni esicasuliwe, ilawula i-sebum futhi inikeza imisoco ukugcina isikhumba sinempilo.
Ukhilimu obala, ofanele ukusetshenziswa esimweni sezulu esishisayo nesinomswakama eVietnam. Uma isetshenziswa esikhumbeni, izizwa ipholile futhi iqabula, futhi ayinzima futhi iqinile.
Intengo yesithenjwa: 510,000 VND
4. I-Kiehl’s Super Multi Corrective Cream Anti-Aging Moisturizer
Lona umugqa wama-moisturizers kwabesifazane abakhulelwe ababhekene nokuguga kwesikhumba. Ngenxa yalokho, abesifazane abakhulelwe bazoba nokuzethemba futhi bahle, ngaphandle kokukhathazeka ngezibonakaliso zokuguga ngemva kokuzalwa. I-Super Multi Corrective Cream kaKiehl inokhilimu owuketshezi, ngakho ingena ngokushesha esikhumbeni futhi ifanele zonke izinhlobo zesikhumba, ikakhulukazi kwabesifazane abakhulelwe nabesifazane abanesikhumba esinamafutha. Ukhilimu owuketshezi ulungile, ngakho-ke uma usebenzisa ukhilimu emini nasebusuku, ngeke ukhathazeke ngokuba namafutha, isikhumba esinamafutha noma izimonyo ngemuva.
I-Kiehl’s Moisturizing Cream La manzi agcwalisa isikhumba kahle ngesithako esinamanzi amaminerali, i-Hyaluronic Acid. Lesi ngesinye sezinto ezingcono kakhulu zokuthambisa isikhumba. Ngaphezu kwalokho, ngezingcaphuno eziphuma esihlahleni se-beech (Isihlahla se-Beech), i-rose, ikhukhamba….izosiza ukuthambisa isikhumba futhi ifake amanzi esikhumbeni. Ikakhulukazi, inamandla okugcwalisa imibimbi, okwenza isikhumba sithambile futhi siqine. Le moisturizer ye-Kiehl ingaba mhlophe futhi ifiphale amafreckles, izimpawu zokuqala zokuguga esikhumbeni ngenxa ye-turmeric essence. Ngakho-ke, abesifazane abakhulelwe nabo bangaqiniseka ngokuphepha nokusebenza komkhiqizo wesikhumba.
Intengo yesithenjwa: 1,250,000 VND
5. Safe Juice Beauty Nutrient Moisturizer
Uma kukhulunywa ngamakhono okuthambisa aphephile kwabesifazane abakhulelwe, iJuice Beauty Nutrient Moisturizer igama elithenjwa kakhulu. Umkhiqizo uqukethe amafutha ejojoba kanye nembewu ye-avocado ukuze isikhumba sizonikezwa izakhi ezidingekayo. Ukuletha ikhono lokuthambisa futhi bushelelezi isikhumba sabesifazane ngesikhathi sokukhulelwa kuphumelela kakhulu ngaphandle kokulimaza impilo ye-fetus. Ngaphezu kwalokho, izithako zenhlaba kanye nezimila zasolwandle ku-Juice Beauty Nutrient Moisturizer zinomthelela opholile esikhumbeni, ikakhulukazi lezo ezinesikhumba esomile noma esiqhekekile.
Ngalokho, I-Juice Beauty Nutrient Moisturizer Iphinde ibe nezinto ezivelele zokuvuselela isikhumba. Ikalwe kakhulu ngochwepheshe uma iqhathaniswa neminye imikhiqizo emakethe ngenxa ye-Flavonoid essence. Ngalesi sithako, isikhumba sakho sizonikezwa amavithamini anele, sivuselele isikhumba esonakele futhi sikhuthaze ukuvuselelwa kwesikhumba nokulwa nokuguga. Ukuthungwa komkhiqizo kufana nejeli, uma kufakwe esikhumbeni, kupholile futhi kukhululekile. Ngemva kwesikhashana uzothola ukuthi isikhumba sithambile ngokwedlulele, sinephunga elimnandi elihlala esikhumbeni.
Intengo yesithenjwa: 1,400,000 VND
Amanye amanothi lapho usebenzisa ukhilimu wesikhumba wezinhlanzi ezikhulelwe
Okokusetshenziswa cream moisturizing kwabesifazane abakhulelwe ukusebenza kahle okuphezulu kanye nokuqinisekisa ukuphepha okuphezulu. Uma usebenzisa i-moisturizer, abesifazane abakhulelwe kufanele baqaphele okulandelayo.
Okokuqala, akufanele ujahe, udinga ukuphikelela ekuyisebenziseni ngoba awukho umkhiqizo ongakusiza ukuthi uthole umphumela ngokushesha. Uma ufuna ukwenza isikhumba sakho sibe mhlophe futhi uvimbele ama-stretch marks, udinga ukubekezela ukuze ubone ushintsho nsuku zonke.
Okulandelayo, akufanele futhi usebenzise i-moisturizer eningi kakhulu ngenjongo yokuzuza imiphumela esheshayo. Noma sebenzisa ingxube yokhilimu abaningi ngoba ingabangela ukucasuka nokulimaza impilo yakho nengane yakho engakazalwa.
Ukwengeza, uma usebenzisa okokuthambisa, kufanele wengeze ezinye izakhamzimba ezitholakala ekudleni, uphuze amanzi anele usuku ngalunye futhi uklame indlela yokuphumula enengqondo.
Lapho isikhumba sibonisa izimpawu zokungajwayelekile ngesikhathi sokusebenzisa ama-moisturizers noma izinkinga zempilo. Sicela ume ngokushesha futhi uye esibhedlela ukuze uyohlolwa ngokushesha okukhulu.
Ngenhla kukhona amasheya ethu mayelana nabangu-5 abaphezulu cream moisturizing kwabesifazane abakhulelwe ehamba phambili emakethe. Ngesikhathi sokukhulelwa, isikhumba sizokoma futhi sihlangabezane nezinkinga eziningi, ngakho-ke khetha i-moisturizer yabesifazane abakhulelwe ukuze uqinisekise kokubili ukuphepha nokunakekelwa kwesikhumba okuphumelelayo. Inhlanhla abesifazane abakhulelwe!
Xem Thêm [Review] TOP 5 bình tưới cây mini tốt giá rẻ bán chạy nhất | Muasalebang
Top 6 Tinh dầu nước hoa Dubai chính hãng mùi nào thơm nhất | Muasalebang
Cách kiểm tra iPhone XS Max chính hãng | Muasalebang